Iibso Daryeelka Maqaarka Nadiifinta Korantada Dheemanka Korantada - Korantada Bilaashka ah & Cashuur La'aanta | WoopShop®
Nacnaca Korantada Jirka Korriinka Daryeelka Maqaarka
Nacnaca Korantada Jirka Korriinka Daryeelka Maqaarka gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Item: Nadiifiyaha
feature: Nadaafadda Nac
Nooca: Wejiga Nadiifinta Wejiga Korantada
Dhismooyinka: Hoose / Sare
Gelinta: 100-240V 50 / 60Hz
Wax soo saar: 12V 500mA
Nuujinta: Max 5.3KPa
Buuq: Max 60dB
Wakhtiga lacag bixinta: Saacadaha 8-10
Waqtiga Adeegsiga: Qiyaastii daqiiqadaha 45
Midab: Buluug, guduud, casaan
Cabbirka: 20x5.5cm (Length * Width)
Dib u dhig gabowga maqaarka, yaree burburka, ka saar maqaarka jilicsan iyo midabka, ka dhig maqaarka mid cidhiidhi ah, dhalaalaya, jilicsan, soo noolaynta.
Ka qaadista maqaarka gaboobay, daloolada nadiifka ah ee qoto dheer. Iska yaree midabka maqaarka iyo midabka maqaarka oo aan sinnayn. Nadiifsan oo yareeya finanka iyo maqaarka nabarrada gubashada ka dib (badanaa waxay qaadataa ugu yaraan 10 daaweyn) Xalliyaa dhammaan dhibaatooyinka maqaarka, jaallaha jilicsan, daloolada aan caadiga ahayn, bacaha indhaha, barar, laablaabasho, dabacsan, maqaarka maqaarka oo kacsan, wiishka kor u qaada, ka saar calaamadaha fidsan iyo dufanka xariijimo, caato ah. Isticmaal 2-3 jeer usbuucii, 5-10 daqiiqo markiiba. Dhererka dhererkiisu ka kooban yahay 470nm buluugga nalalka ah, nadiifi oo jeermiska ka nadiifi, nadiif iyo nadaafad. Inta lagu jiro amarka, nalka cas wuxuu had iyo jeer sii socda bilig dhalasho. (Xitaa marka batteriga si buuxda u shaqeeya). Fiiro gaar ah: Kuma haboona maqaarka xasaasiga ah. Content ee Xidhmada:
1 x Jirka ugu weyn (Adapta ku habboon ayaa loo diraa iyadoo loo eegayo waddankaaga)
1 x Saldhigga dallacsiinta birta
1 x Weelka aruurinta
1 x jeebka safarka
1 x Caarada dusha sare ee jirka #75
1 x Caarada dusha sare ee wejiga #100
1 x Caarada dusha sare ee jirka #200
1 x Caarada horudhaca ah #200
1 x Buugga isticmaalka (Ingiriis)
comactement comme décris
Lagu helay bil gudaheed. Iyadoo lala socdo. Mararka qaarkood haddii gacanta kale lagu qaato, ama loo janjeero waxay sameysaa runti layaableh dhawaq qaylo dhaan ah oo mararka qaarkood aan yeelin. Marka anigu ma ogi haddii taasi xumaatay, ama waa inay dhawaaqaas samaysaa. Waxaan rajeynayaa inay shaqeyn doonto oo aysan qarxin ama nidaamka ka baxin. Sax og qanac.
Aad u wanaagsan 100%